अर्थ Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सोमवार, माघ २९, २०७४
काठमाडौं । आईतबारको तुलनामा सोमबार सुनको मूल्यमा दुई सय रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । आइतबार प्रतितोला ५६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज सोमबार ५७ हजार रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व...
मोरङका युवाको यो उदाहरणीय काम, किन विदेश जाने पैसा कमाउन ?
आइतवार, माघ २८, २०७४
मोरङ । दैनिक रुपमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको अवस्थामा मोरङको राजघाटका युवा हेमबहादुर चोङवाङ मिहेनत गरे राम्रो पैसा कमाउन विदेश जानु पर्दैन भन्ने गतिलो उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । एक...
अण्डा उत्पादक संघमा कँडेल
चितवन, २८ माघ । देशभरि कुखुरापालन गरी अण्डा उत्पादन गर्ने कृषक र बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल अण्डा उत्पादक संघको अध्यक्षमा चितवनका त्रिलोचन कँडेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यसअघिको...
बुढीगण्डकीलाई सरकारको एक खर्ब अनुदान
शनिबार, माघ २७, २०७४
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ...
बैठकमा चर्काचर्की: जब अर्थमन्त्री पाखुरा सुर्कंदै आए
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूकम्पपीडितलाई दिँदै आएको सहयोगमा थप एक लाख दिने निर्णय गर्दा प्रक्रिया नमिलेको स्वीकारेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । ‘भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई...
बझाङको चैनपुर र धादिङ्गको धादिङ्गवेशीमा एन आई सी एशियाको नयाँ शाखा सञ्चालन
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंकले बझाङको चैनपुर र धादिङ्गको धादिङ्गवेशीमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. १० चैनपुर र निलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ०३, धादिङ्गवेशीमा...
काठमाडौँ । बुटवल पावर कम्पनीले आह्वान गरेको थप निष्काशन (एफपिओ)मा मागअनुसारको आवेदन नपरेपछि संस्थागत लगानीकर्ताले पनि शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्याप...
चमेलियाबाट शनिवारदेखी विद्युत् उत्पादन शुरु हुँदै
दार्चुला । सरकारी लगानीबाट निर्माण भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।आयोजनाले एक महिना बढी समय लगाएर दुई युनिटको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि ...
सरकार थप १ हजार ६४ जनालाई १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी
काठमाडौं । सत्ताबाट बहिर्गमन हुने बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप १४ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेका छन्। सम्भवत: अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिक...
भारु नोट प्रतिबन्धित तर चल्तीमा
काठमाडौं । चिया व्यवसायी आनन्दकुमार मित्तल ८ माघमा विराटनगरबाट पक्राउ परे। प्रहरीले उनको साथबाट दुई हजार दरका चार सय २५ थान भारतीय रुपैयाँ बरामद गर्‍यो। ऋण तिर्न भारतमा बसोबास गर्ने आफन्तबाट मित्तलले ...
चमेलियाको उद्घाटन माघ २७ गते
दार्चुला । दार्चुला जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिका–१, बलाचमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चमेलिया जलविद्युत्को औपचारिक उद्घाटन माघ २७ गते हुने भएको छ । सरकारी लगानीमा निर्माण भएको ३० मेगावाटको चमेलिया...
एन आई सी एशिया बैंकमा सी—आस्वा सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले सी—आस्वा सेवा (Centralized Application for ASBA Based Issuance) सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा धितोपत्र खरिद गर्न आवेदन दिं...
पेचिलो बन्दै प्रदेश खर्च
काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै त्यसको खर्च व्यवस्थापन र स्रोतको विषय पेचिलो बनेको छ। चालु आवको बजेटले प्रदेशका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरे पनि दीर्घकालमा प्रदेश आफ्नै आम...
मुआब्जा वितरणले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाटो खुल्यो
वीरगञ्ज । जग्गाधनी मुआब्जा लिन आएपछि केही वर्ष अघिसम्म अन्योलमा रहेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निमार्ण कार्यले गति लिन थालेको छ । बहुप्रतिक्षित आयोजनाको रुपमा रहेको सो विमानस्थलको जितपुर सिम...
विद्युतभार कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक क्षमतामा बृद्धि
काठमाडौँ । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि मुलुकको औद्योगिक क्षमतामा ९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आर्थिक गतिविधिको अध्ययन प्र...
भन्सार कार्यालय नहुँदा राजश्व संकलनमा कमी
कञ्चनपुर । बेलौरी नगरपालिकामा रहेको बेलौरी छोटी भन्सार कार्यालयको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । भारततर्फ भन्सार कार्यालय नहुँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सामान ल्याउन नदिँदा राजश्व घटेको हो । मा...
सिद्धार्थ बैंकद्वारा आश्रमलाई सहयोग
म्याग्दी । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड म्याग्दी शाखाले बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरधाममा अवस्थित ज्येष्ठ नागरिक आश्रमलाई रु दुई लाख ११ हजार आर्थिक सहयोग गरेको छ । आइतबार बेनी शाखाको उद्घाटनका अवसरमा बैंकका सह...
माथिल्लो तामाकोशीको दुई अर्ब ६३ करोडको साधारण शेयर आउँदै
आइतवार, माघ २१, २०७४
काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि रु दुई अर्ब ६३ करोड ८५ लाख बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) जारी गर्ने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा...
नमूना च्याउ घरबाट नौ लाखभन्दा बढीको च्याउ बिक्री
कञ्चनपुर । बेलौरी नगरपालिकामा बनाइएका दश वटा नमूना च्याउ घरबाट रू नौ लाख बराबरको च्याउ बिक्री भएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखाको आव २०७४÷७५ को कार्यक्रम अन्तर्गत रु दुई लाख अनुदान रकमबाट १० वटा वडामा च्...
कुनै पनि सदस्यले कालोबजारी र ठगी गरेका छैनन्ः नाडा
काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनअफ नेपालले स्वतन्त्र रुपमा व्यापार-व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन् हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरेको छ । नाडाका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विज्ञप्त...